ह्याकरको सबैभन्दा ठूलो सेना कुन देशसँग छ ? - Paschimnepal.com
गत महिना अगष्टमा हरेक वर्षझैँ अमेरिकाको लस भेगासमा एक विशेष मेला लाग्यो । त्यो मेला ह्याकरहरुको थियो । जसमा साइबर विज्ञहरुदेखि लिएर बच्चासम्म, हरेक उमेरका मानिसहरुले आफ्नो ह्याकिंग क्षमता देखाए ।
कसरी चल्दछ ह्याकिङ्गको साम्राज्य ?
रुसका सरकारी ह्याकर
इरानसँग पनि छ ह्याकर सेना
प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ २४, २०७५ 7:35:08 PM
Prevगुगल कसरी बन्यो सर्च इन्जिनको बादशाह ?
Next‘सपना दिदी’को संझौता रकम फिर्ता गरिन् दीपिकाले